Dagaal iyo duqaymo culculus Oo saaka ka bilowday Muqdisho. – Radio Daljir
Dagaal iyo duqaymo culculus Oo saaka ka bilowday Muqdisho.
Muqdisho Oct 22 – Saaka subaxnimadii hore ayaa Waxaa Dagaal qaraar ka dhacay Magaaladda Muqdisho Taas oo ay isku hayaan Mucaaradka islaamiyiinta Oo dhinac ah iyo Ciidamadda DKMG ah iyo kuwa AMISON Oo is kaashanaya.
Dagaalka Saaka dhacay Muqdisho ayaa Waxaa la sheegay in ay weerarka soo qaadeen Xoogaga islaamiyiinta ah ee iyagu ka dagaalama koonfurta somalia iyadoona Wararku sheegay in Madaafiic lagu garaacay ciidamadda dowladda oo ku sugan Wadda dabka ee Magaaladda Muqdisho.
Madaafiicda ayaa Waxaa Warar ka soo gaaray Warbaahinta daljir ay sheegayaan in ay qaarkood ku dheceen Suuqa wayn ee bakaraaha Magaaladda Caasimadda ah halkaasi Oo aan la soo sheegin khasaaraha ay geeysteen Madaafiicda waa wayn ee lays dhaafsanayey kadib markii uu dagaalku Noqday mid laysu jawaabo labbada dhinac ee iska soo horjeeda Meleteriga dowladda iyo kuwwa islaamiyiinta.
Wararka intaas Waxay ku darayaan in Markii ay dagaalka soo qaadeen Ciidamadda islaamiyiinta ay halkaasi marayeen masuuliyiin ka Tirsan kuwa dowlada somalia Waana Wax Caadi ah marka masuuliyiin ka tirsan kuwa Dowladda KMG ah ee somalia Markay halkaasi marayaan in la gaaraco oo duqaymo loo Geysto Garoonka ilaa Madaxtooyadda inta u dhexaysa.
Ilaa iyo hadda ma jiraan Wax war ah Oo sheegaya khasaaraha dhimasho iyo dhawaac ee ay geysteen duqay mahaasi ka dhacay muqdisho iyadoo la soo sheegayo in ay Madaafiicda labbada dhinac is waydaarsanayeen qaarkood ay ku dhiceen Xaafaddo ka Tirsan Nawaaxiga Wadada dabka iyo suuqa wayn ee bakaaraha.